Waxaanu ku caan baxeynaa si aan u aragno inay qurxoon tahay oo qurux badan leh oo ku labisan daaqadaha dukaamada waawayn, oo aynaan xitaa ka fekerin goorta iyo sida ay u muuqdaan halkaa, caruurtani waxay ku jiraan dhererka nin "... u eg sida dadka ..."? Laakiin taariikhda munaasabadu waxay leeyihiin xididada qadiimiga ah oo aan ka sii darnayn wax ka soo jiidasho wanaagsan.
Xitaa gabdhaha gabay gabdhaha ah ee Romaaniga ah waxay bartay munaasabada casriga ah ee aan ka soo jeedin joornaalada casriga ah (maalmahaas ma aysan dhicin), laakiin dharka dhoobada dhoobada, oo la keenay ganacsatada ganacsiga. Waxay sidoo kale inta badan soo bandhigaan waraaqaha dharka dhogorka lagu rido, sidaas daraadeed dumarka doonaya inay la socdaan moodada ma ahan kaliya inay ku celiyaan qaabka, laakiin sidoo kale waxay ka soo saari karaan waxyaabo cusub oo isku mid ah.
Bilawga qarnigii qarniga 14aad waxay ka muuqdeen Paris. Waxay ahaayeen qoryo iyo qaali. Anna Czech, oo ah haweeneydii ugu horreysay ee King of England Richard II, ayaa ka heshay 1391 oo ah foorno ka timid Paris oo ay la socdeen shaqooyinka cusub ee couturiers Paris oo ku xiran iyada. Dhacdadani waxay ahayd mid aad u muhiim ah oo ay ka muuqatay taariikhda taariikhda taariikhiga ah ee maxkamadda boqortooyadda, sida uu sheegay Robert De Varence, oo kuxigeenka boqorka Faransiiska Carl Six, oo ku saabsan helitaanka qiyaasta afar boqol iyo konton frank oo loogu talagalay caruusadaha casriga ah - hadiyad loogu talagalay Queen of England. Sidaa daraadeed, carruubka baaxadda nin, oo leh dhar-xidhid - sheyga hijran ee gabadh kasta oo hodan ah, wuxuu u adeegay maxkamad maxkamad sida hagaha waddanka qaabka ah 40. qarnigii qarniga 17-aad ee faras-farabadan oo farabadan oo France ah ayaa lagu beddelay shumacyo alwaax ah, "Xabashi" laabta oo leh tuulo dhar ah oo dhar ah. Waxaa laga yaabaa in arrintani ay sababtay in guntii carruurnimadu u muuqato mid la mid ah sawirka maskaxeed ee Pandora, kaasoo ku xadgudbay sharciga "ha ku dhibin sanka, halkaasoo aysan raacin!" (Waxay gadaal u furtay shilkeedii dadka dadwaynaha) iyaga oo u yeertay pandora.
Qarnigii 17aad, casriyeynta casriga ah ayaa bilaabay inay muuqdaan boggaga daabacaadaha daabacan, markii ugu horeysay ee "wakiil xayeysiis ah" wuxuu ahaa wargeyska "Gallant Mercury", laakiin wareegiisa yar wuxuu noqon karaa tartan culus ee murgacayaasha pandora. Caruurtu waxay raaceen sanduuq buuxa oo dhar ah, kabo, qalab casri ah iyo xitaa cadar. Dhanka Ruushka, fashionka loogu talagalay cunugyada pandora ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay wakiillo ka socda maxkamadda boqoradda: gabadha boqortooyada ee Gatchina wali waxaa lagu hayaa dollo - pandora, oo samaysay qaabka shakhsiga ah ee boqoradda Faransiiska Marie Antoinette Ros Bertendl Empress Maria Feodorovna.
Ka dib markii ay ku guuleysteen Yurub, carbuunta pandora waxay gaareen America, halkaas oo waqtigan waxaa jiray haween isku mid ah, oo xiiseynaya qaab ciyaareed heer sare ah oo Yurub ah. Waxaa jira xitaa halyo qurux badan oo markii caruurtani la geeyay hawlgallo milatari, taliyeyaasha millatariga ayaa joojiyay dagaalladii waxayna soo gudbeen caruusadaha pandora, iyagoo abaabulaya "waddada cagaaran".
Dharka quruxda badan ayaa la filayay in lagu soo bandhigo ilmo qurux badan oo qurux badan, oo ay la mid yihiin gabdhihii aamminsanaa, sidaas awgeed qarnigii 19aad waxaa jiray shirkado takhasus ah oo soo saara madaxyo qurxoon oo jilicsan iyo meydad laga sameeyey alwaax. Codsigii wuxuu soo jeediyay soo jeedin.
Qorraxda oo ah monopoly ee carafta pandora waxaa loo tixgeliyaa inay ahaato sannadkii 1860, markii ay si dhaqso ah u bedeleen joornaalada fashionka. Laakiin dhaxalka caruusadda pandora kuma dhacdo adduunka casriga ah. Waxay si joogta ah u joogaan oo waqti dheer ayay degeen daaqadaha dukaamada. In adduunka, heihom jilicsan, dhaxalka pandora weli xayeysiis dharka moodada, kaliya hadda, iyada oo ay la socdaan maanka haweenka quruxda badan waxay u muuqdeen rag iyo caruur.
Soo-saaridda fayaqabka waa warshad guud oo leh fannaanyahanada, farmashiyeyaasha, injineerada iyo sculptors. Halkan, tiknoolojiyada ugu dambeeyay iyo qalab nalalka ah ayaa la isticmaalaa, iyadoo la adeegsanaayo farsamooyin fudud oo shaqaynaya. Waalidiinta Pandora ma ahan kuwo degdeg ah si ay uga baxaan booskooda.
Valentine Yudashkin ee soo ururinta caleemaha at Week Fashion Week Paris
Makario Jimenez qayb ka mid ah moodooyinka ku saabsan podium, iyo waa macquul - waa xagaaga ugu dhakhsaha badan!
Astaanta Calaamadda: ururinta wadajirka ee Karine Roitfeld x Uniqlo
Astaanta kabaha ee Premiata waxay siisaa kor u kaca dhulka
Waa maxay sababta nin ka cabsanaya kulanka?
Maxay raggu been ugu sheegaan haweenkooda iyo isbedelkooda
Cuntada ka hor tababarka - jimicsiga
Digaaga quruxda ee Thai
Sidee loo doortaa shanlada midig?
Amber acid oo lumay miisaanka
Calaamadaha arooska loogu talagalay aroosadda iyo arooska: maxaa samayn kara oo aan la qaban karin si noloshu u faraxdo
Maraq balsa ah
Vareniki oo leh baradho iyo boqoshaada
Saliida sayniska ee miisaanka
Kariimka dhanaan la'aan caano
Waxaan ubaahanahay ilmaha cusub ee cirbadaha isku dhejisan - oo la dhigay gacmaheena
Waxaan luminaa miisaanka muddo dheer: cuntada Japan
Sida loo helo nin inuu ku ordo ka dib